Macallimiinta & Ardayda “Aada Dugsiyada” oo Debadbax ka dhigay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Macallimiinta & Ardayda “Aada Dugsiyada” oo Debadbax ka dhigay Muqdisho
10th May 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Macallimiinta iyo ardayda Mashruuca “Aada Dugsiyada” ayaa mar kale maanta Muqdisho ka dhigay debadbax cabasho ah, kadib markii ay soo wajahday xaalad oo sababi karta in shaqadaasi joogsato.
Macallimiinta ardayda ayaa ka cabanayey dhaqaale xumo heysta dugsiyada hoostaga barnaamijka aada dugisyada ee ay maamusho wasaaradda waxbarashada Soomaaliya.
Waxyaabaha ay macallimiinta “Aada Dugsiyada” ka cabanayeen ayaa waxaa ka mid ahaa:
1: Mushaar la’aan joogto.
2: Agab la’aan sida Korontada Biyaha IWM.
3: Wadashaqeyn la’aan Wasaarada iyo Aada Dugsiyada.
4: Wasaarada oo dhowr mar ku cel-celisay inay bixisay mushaarka Shaqaalaha Aada dugsiyada, muddo 9-biloodna aan la siin wax mushaar ah.
5: Aqoonsi la’aan sida ID-Card iyo wixii lamid ah.
6: Agaasimayaasha qaar oo ay ufuran yihiin dugsiyo gaar ah oo ay iyaga leeyihin.
Mid ka mid ah macallimiinta oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashadu ay dayacday dadka ka shaqeeya “Aada Dugsiyada” iyo ardaydii wax ka baraneysay.
Qaar ka mid ah ardydii ka qeybgalay debadbaxa oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Iskuullada ay dhigtaan laga jartay biyaha iyo korontada, islamarkaana macallimiintu mushaar la’aan yihiin, taasina keeni karto iney sii wadan waayaan waxbarashada.
16-kii Janaayo ee sanadkaan 2014 ayay macallimiinta “Aada Dugsiyada” ku dhaqaaqeen shaqo joojin kadib markii mushaar la’aan ku dhacday, waxaana dowladda Soomaaliya aysan weli ku guuleysan iney furto hal Iskuul oo aad usoo jiita aradyada iyo waalidiinta.
Askar laga ceyriyey milateriga Soomaaliya oo markale debadbax dhigay